हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं, तर समाज बदल्न सकेनौं, ‘ऐना’मा यही तस्वीर प्रस्तुत गर्दैछु: विश्वप्रकाश शर्मा « Asia Sanchar : Nepal News Live
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रखर वक्ता हुन्। स्पष्ट दृष्टिकोण र युवाहरूमाँझ लोकप्रिय नेता शर्मा अब टेलिभिजनको पर्दामा प्रस्तोताका रुपमा देखिने छन्। सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित, नवीनतम् प्रस्तुतिसहित टेलिभिजन शो ‘ऐना’ बुधबारबाट प्रसारण शुरु भएको छ। ऐना कार्यक्रम निर्माण, यसका विषयवस्तुसहित समग्र विषयमा कांग्रेस प्रवक्ता एवं ‘ऐना’का प्रस्तोता शर्मासँग गरिएको कुराकानीः
–तपाईको प्रश्नलाई मैले २ पाटोबाट अनुभूति गर्छु। एउटा राजनीतिक मान्छे भन्ने पाटो अनि अर्को नयाँ क्षेत्रमा भन्ने पाटो। मुलतः म एक मान्छे हो। एउटा नेपाली। मेरो समाजप्रतिको कर्तव्यलाई निर्वाह गर्ने क्रममा म एउटा लोकतान्त्रिक बाटोमा एक राजनीतिक कार्यकर्ताका रुपमा क्रियाशील हुन्छु। त्यो मेरो जीवनको एउटा पाटो हो। तर, मूलरुपमा त म यो समाजको सदस्य हुँ। यो समाजको सदस्य रहँदै गर्दा राजनीति मेरो एउटा पाटो होला। तर, जीवनका अरु पनि पाटोहरू हुन्छन्। साहित्य होला, संगीत होला, दुई पैसा आयआर्जन गर्ने व्यवसाय होला। त्यसैले प्रस्तुतिको विषयमा जाँदै गर्दा त्यो राजनीतिक मान्छेको अर्कै कर्तव्य होला, त्यो कर्तव्यलाई नि प्रश्न उठाउने यो कार्यक्रम प्रस्तोताको विषय होला। अर्को चाँहि तपाईले नयाँ क्षेत्रमा भन्दै गर्दा, यसो सोच्दा त मलाई पनि नयाँ क्षेत्र लाग्न सक्छ। धेरैले त मलाई टेलिभिजन प्रस्तोताको रुपमा हेर्दा गर्दा एकाएक राजनीतिको मान्छे पत्रकारितामा आयो, प्रस्तोताको रुपमा आयो भन्ने सोच्नुहोला।
‘ऐना’बारे प्रस्ताेता विश्वप्रकाश शर्मासँग गरिएकाे अन्तरवार्ता (भिडियाे)
हो, टेलिभिजनको प्रस्तोताको रुपमा मेरा लागि यो नौलो अनुभव हो। तर, पत्रकारिता क्षेत्र मेरा लागि नौलो होइन। पञ्चायतकालमा पनि म साप्ताहिक विचार अथवा साप्ताहिक आलोख खबर जुन निस्किन्थ्यो, म त्यसमा पनि लेख्थेँ। ४६ सालको परिवर्तनपछि ५१ सालतिर देवप्रकाश त्रिपाठीज्यूले संयोजन गरेको रेडियो नेपालको घटना र विचार कार्यक्रममा म उहाँका साथमा प्रस्तोताको रुपमा थिएँ। त्यसपछि ५१ सालमै दर्ता गरिएको घटना र विचार साप्ताहिकमा देवप्रकाश त्रिपाठी ज्यूपछि छोटो अवधि ४–५ महिनाका लागि मैले सम्पादक रुपमा पनि काम गरेको थिएँ। त्यसकारण पत्रकारिताको क्षेत्रमा म आफ्नै घर वा आफ्नै ठाउँमा आएको हुँ भन्न चाहन्छु। मेरा लागि टेलिभिजन प्रस्तोताका लागि मेरो नयाँ अभ्यास हो। यसमा कमजोरीहरू हुन सक्छन्। म सुझाव, सल्लाह ग्रहण गर्दै र परिमार्ज गर्दै अगाडि बढ्छु। मलाई यसमा एक किसिमको आत्मीयता महसुस छ, सँगै मलाई गम्भीरता पनि महसुस छ। जुन विषयवस्तुमा म जाँदै छु, त्यो विषयवस्तुले मलाई उत्साहित होइन बढी भावुक, कारुणिक र जिम्मेवारी बोध भएको छ।
–ऐनाले एकदमै नवीन चिन्तन गर्ला वा गर्नेछ भनेर मैले नै यकिन गर्न उचित हुँदैन। ऐना टिमले समग्रमा गरेको परिकल्पना के हो भने केन्द्रीय बहसमा कम प्राथमिकता पाएका विषयलाई केन्द्रीय बहसमा ल्याउनु हो। यसले बहसमा ल्याउँछ, ल्याउनुपर्छ। निष्कर्षमा यसैले पुर्‍याउँछ भन्नु गलत हुन्छ, महत्वकाँक्षी हुन्छ। तर, यसले भन्ने छ, देश बन्नु भनेको बाटो बन्नु र बिजुली निकाल्नु मात्रै होइन। त्यो काम पनि गर्नुपर्छ। तर, त्यो मात्र गरिनु होइन। देश बन्नु भनेको राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन। हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं, राजनीतिक व्यवस्था बदल्यौं। तर, हामीले सामाजिक अवस्था किन बदल्न सकेनौं? यो विषयलाई किन बिर्सिएका छौं? अग्ला–अग्ला गगनचुम्बी भवनहरूमात्र बनाएर देश समृद्ध भयो भनेर प्रस्तुत गर्ने? अनि त्यसको सतहमा चाँहि धेरैको क्रन्दन, पीडा र आँशु बिर्सिरहने? ‘ऐना’ले त्यही गगनचुम्बी भवनको गहिराइमा लुकेका, दबिएका विषयलाई सतहमा ल्याउँछ। केन्द्रीय बहसमा ल्याउँछ। अनि यसले भन्छ कि अब यी विषयलाई अध्ययन, विश्लेषण र निष्कर्षमा पुर्‍याएर अनि मात्र देश सुन्दर हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा देखाउँछ।
‘विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नकै लागि इक्यान शैक्षिक मेला’